Thwebula Trend Micro 12.0.1191 Antivirus+ Security... – Vessoft
Thwebula Trend Micro
Ukuvikelwa okuphelele, Antivirus/
Ikhasi elisemthethweni: Trend Micro
I-Wikipedia: Trend Micro
I-Trend Micro – i-antivirus yanamuhla engakwazi ukubona nokuvimbela izinsongo ezihlukahlukene ngejubane eliphezulu. Isofthiwe ithola ukuhlaselwa kwegciwane ngesikhathi esisodwa futhi ivimbela ukutheleleka kwekhompyutha. I-Trend Micro ingavikela ikhompyutha yakho ngokukhwabanisa kwe-imeyili, thola izixhumanisi eziyingozi ngesikhathi sokusesha ezipheqululini ezahlukene futhi uhlole izixhumanisi kumanethiwekhi omphakathi. Isofthiwe ine-module eyakhelwe ngaphakathi ukuvikela idatha ngokumelene ne-ransomware ne-encryptors. I-Trend Micro ikuvumela ukuthi ulungise izinketho zokuskena bese ufaka izinga elidingekayo lokuvikelwa ezidingo zomsebenzisi.
Ngokushesha ukutholakala kokuhlasela kwegciwane
Ukuvikelwa ngokukhwabanisa kwe-imeyili
Ukutholwa kwezixhumanisi eziyingozi
Ukuvikela ngokumelene ne-ramsonware
Amazwana ku Trend Micro
Trend Micro software ehlobene
Lena isilondolozi esinamandla esiphephile nesisombululo sokuvikela ukuvikela ubumfihlo nokuphepha kwe-PC yakho yasekhaya kusuka ezinhlobonhlobo zokuhlaselwa.
Lokhu kungenye ye-antivirus ethandwayo kakhulu eneqoqo elicebile lezici zokuphepha, ubuchwepheshe bokufunda komshini, kanye nedatha enkulu yokuthola izinsongo.
Lesi yisixazululo esinamandla esiphephelo se-antivirus esivela enkampanini enegama elihle embonini ye-cybersecurity ukuvikela ikhompyutha yakho ngokusongelwa okuphambili, ukuhlaselwa kobugebengu kanye nokuhlaselwa kwewebhu.
I antivirus software iphakethe ukuvikela ikhompyutha yakho. Isofthiwe inikeza ukuhlala ephephile in enethiwekhi uqaphe traffic for izinsongo kunokwenzeka.
Lesi isisombululo sesimanje se-antivirus ukuthuthukisa ukuvikelwa kwedatha yomuntu siqu ngokulwa nokuhlaselwa kwewebhu, ukukhwabanisa, ugaxekile, i-rootkits, i-ransomware ne-spyware.
Le software yenzelwe ukuguqula ama-disks we-Blu-ray namafayela we-HD MKV kwifomethi ye-AVCHD ngaphandle kokulahlekelwa kwekhwalithi futhi ngesandla usethe usayizi ukugcina idatha kuma-disks amancane.
Isofthiwe yokuhumushela imiyalezo angenayo naphumayo in Skype. Isofthiwe isekela amasevisi ethandwa wokuhumusha nge eziningi izilimi.
Isofthiwe obusebenzayo wathumba isiqophi kusuka computer yakho. Isofthiwe kuhlanganisa ubuchule ekhethekile ukuthi ukuvimbela umthelela ijubane izicelo ngesikhathi kumarekhodi abo.